Dhowr Geedaha Best House - Shiinaha Qingdao King Good New Qalabka
Inkastoo ay jiraan dad badan oo dhirta cagaaran ciyaari kara hawada nadiif ah, si wax ku ool ka saar doorka wasakhda gudaha, laakiin dhawaan la dayac tiray guryaha sakhiray in wasakhda kiimikada, Hadeydaan, Chlorophytum, Sansevieria iyo dhirta kale ee waa shiir ugu fiican ee dabiiciga ah.
saynisyahano NASA 20 sano oo cilmi-baaris ka dib markii lagu ogaaday in in xaaladaha nalalka 24-ka saac, dheri of Hadeydaan baabiin karta 1 mitir cubic of hawada ku jira 90% formaldehyde, dheryihii Chlorophytum noqon kartaa shooladaha, qalabka korontada, alaabta caag Qaybinta carbon monoxide iyo ilaalinta waxaay nitrogen nuugo daalay, laakiin sidoo kale dhurtaan off 86% formaldehyde, caleemaha iyo caleemaha kale dhirta caleenta waaweyn nuugo kartaa in ka badan 80% ka mid ah gaasaska indoor waxyeello. Sidaa darteed, ee 15 mitir oo laba jibbaaran ee qolka fadhiga, beeray labo qeybood ee Chlorophytum ama Sansevieria, wuxuu kaa badbaaadin karaa hawada cusub, ka fog waxyeelo formaldehyde.
Intaa waxaa dheer, geed dheer ee uu u nuugo karaa 90% benzene, oo agave liqi karaa 70% benzene ah, 50% formaldehyde iyo 24% of trichlorethylene; buluug ah ku deldesheen oo liqi karaa 96% carbon monoxide, 86% formaldehyde. Iyadoo kumquat, rummaan, japonica Mirabilis iyo diversicolor Haliotis lahaa iska caabin xoog si fluoride hydrogen. Wisteria lahaa iska caabin xoog si baaruud dioxide, chlorine iyo fluoride hydrogen. Camellia, rummaan, Milan chlorine aadka sun ah, waxay leeyihiin nuugista iyo raasamaal awood gaar ah; Gardenia, rummaan, Milan nuugo kartaa baaruud indoor dioxide, liinta iyo hawada gudaha rosemary ka dhigi kara bakteeriyada iyo sheyga aad hoos u.
Waxa intaa dheer in kor ku xusan waa in ay shuruudaha iftiinka nuugo kartaa gaasas indoor waxyeello warshad geed- ubax cagaaran, waxaa jira qaar ka mid ah ubaxa ee habeenkii loo daahiriyo hawada, taas oo noocyo badan ah oo timir ah brown, waxaad qurxisaan buluug gaaban, wax karbaashana, Gaelan , Maalinta, koob-qaabeeya xididada, cananaaska kaymo iyo shabeel Pilan iyo wixii la mid ah. Waxaa intaa dheer, noocan oo kale ah dhirta leeyahay faa'iidooyinka aad u cad ah - beerto fudud iyo dayactirka, oo inta badan uu sheegay in ubaxa "sugidda wanaagsan."